Icho Chaizvoizvo Kubatanidzwa? | Martech Zone
China, Gumiguru 3, 2019 China, Gumiguru 3, 2019 Douglas Karr
Kana ndikataura nemusikana wangu 83% zvimwe mwedzi uno kupfuura mwedzi wapfuura, ndiri ini kunyanya kubatanidzwa? Zvakadii kana ndikataura zvishoma nezvake? Ndiri kuvimbisana here?
Tsanangudzo dzekuita basa dzakajeka:
(1) Chibvumirano chepamutemo chekuroora.
(2) Kurongeka kwekuita chimwe chinhu kana kuenda kune imwe nzvimbo panguva yakatarwa.
Merriam Webster Tsanangudzo yeKubatanidzwa
Kupfuura a makore gumi apfuura, Ini ndakatanga kuburitsa rant iyi yandaishuvira kuti vashambadziri varege kuratidza izwi iri Kubatana sebhizimisi metric. Nhasi ichiri nyaya muindasitiri yedu saka ini ndatevera nayo pazasi vhidhiyo.
Nguva yakayerwa papeji, nhamba yemashoko, nhamba yevateveri, nhamba yemavhoti, kana kunyangwe iyo maminetsi emavhidhiyo akatariswa haasi kubatsira bhizinesi rako kunze kwekunge iwe uchigona kuenzanisa iyo Kubatana kune chaiko mhedzisiro yebhizinesi. Kana iwe usingakwanise, ingori a zvisina maturo metric.
Ndichiri kugunun'una nezve kushungurudzwa kwetemu Kubatana nhasi nekuti ini ndinoona vatengi vakawandisa vachishandisa mari hombe yemari pane izvo zvisingape chero bhizinesi kubatsirwa.
Hazvisi Kubatana, ndizvo kufambidzana. Uye hazvireve kuti vashambadziri havafanirwe kuteedzera imwe nzira yekudyidzana pakati pevaoni, vateveri, vateveri, vateereri, nezvimwe… ivo vanofanirwa. Asi vashambadziri vanofanirwa kunge vachienderana nekudyidzana neicho chaicho bhizinesi mhedzisiro.
Kufambidzana chero chiitiko chekudyidzana chinoitwa ne, kazhinji, vanhu vaviri nechinangwa cheumwe neumwe kuongorora kukodzera kweumwe semumwe wavo.
Kana vashanyi vako vari kushandisa yakawanda nguva pane yako saiti, makorokoto! Uri kufambidzana zvakanyanya uye chiratidzo chakanaka… asi hachisi chibvumirano. Kana mushanyi wako akatenga rin'i ndokuiisa pamunwe wako, ndiudze kuti wakazvipira. Kana huwandu hwevashanyi hukawedzera uye ivo vachitenga zvakawanda kubva pawebhusaiti yako, ipapo unogona kundiudza kuti kubatanidzwa kwako kuri kuwedzera.
Vatengesi vasingakwanise kuyera kudzoka mukudyara nemasocial media shandisa mazwi senge kubatanidzwa kuita zviri pamutemo kuita kwavo uye wow vatengi vavo… vachitambisa mari yavo.
Jeffrey Glueck paakapa hurukuro yekuvhura paMarketing Association Musangano makore gumi apfuura, akataura nyaya huru ye Travelocity kutanga mushandirapamwe wezvemagariro uchishandisa iyo gnome uye Nzvimbo yangu.
Nemaitiro ekubatanidzwa, mushandirapamwe wakave budiriro huru… wese munhu akashamwaridzana nehunhu uye makomendi nehurukuro dzakabhururuka! Vanhu vakapedza nguva yakawanda vari papeji uye pakanga paine toni yekuburitswa. Nehurombo, zvakadaro, mushandirapamwe wakadhura mazana matatu emadhora uye waive kukundikana pakutyaira bhizinesi kuTravelocity. Mune mamwe mazwi… hapana kubatanidzwa.
PS: Padivi katsamba… Ndine musikana asi hatina kuroorana.
PPS: Kutenda ku Ablog Cinema yekugadzira iyi inoshamisa vhidhiyo! Iyi ndiyo yechipiri mune yedu Ngano, Manyepo, uye Rants dzakatevedzana.
Apr 25, 2009 pa 8: 52 AM
Ishe Makanaka… Ndakapotsa ndadonha pachigaro changu muhofisi mushure mekuverenga musoro wetsamba ino. Traffic haina basa mukufamba kwenguva.. kutengesa ndiko kuverengera.. Revenue. Revenue. Revenue.
Apr 25, 2009 pa 12: 51 PM
Makorokoto nekuunza Stephen muchikepe. Mukomana akanaka uye ndinofara kuti abatana nemi… Ndinofunga kuti muchashamiswa nemaziviro aanoita uye magadzirisiro aanoita zvinhu.
Re: izvi. Ini ndinofunga kuvaka hukama nevatengi vako uye vatengi kwakakosha zvakanyanya - uye zvimwe zvinhu zvakaoma kuyera. Chimwe chezvikonzero nei ndichida mabhurogi uye social media zvakanyanya ndechekuti NDINOGONA kuve pachena, ndinogona kutendeseka, ndinogona kupa vatengi vangu kutarisisa - asi kupfuura zvese - NDINOZIVA kuti zvese izvo zvinhu izvo zvaive zvakaoma. kuyera kare zvinoyerwa zvino.
Ini ndinongoda kupikisa vatengesi kuti vape vatengi vavo funnel inooneka inovapa humbowo hwekuti a inotungamira kuna b, b kusvika c, uye c kusvika d. Kana vatengi vaona kuti kuve pachena, kutendeseka uye kuwanikwa… vanozozviitira zvirinani! Tingofanire kuzviratidza kwavari.
Zvakanaka kukuona pano! Unouya rinhi kuThe Bean Cup?
Apr 25, 2009 pa 11: 44 AM
Zvimwe tichapinda munharo ye semantic pano, asi ndinofunga kuti chinhu chimwe chakakodzera kuva nacho.
A. Zvinoita sekuti kubatikana chiitiko chimwechete mukufananidza kwako (kana kuti chiitiko chakatangwa chete nekutenga). Ndinogona kupokana kuti imwe tsananguro yekubatana ndeye "kukwevera mukati kana kubatanidza" munhu munhaurirano kana hukama. Kupfimbana hakusi chinhu chimwe chete kana kuti chiitiko chekupedzisira. Ndihwo hukama hudiki hunoguma nehukama hwakapfuma pakati pekambani nemutengi. Iri kudzika nhambwe pakati pavo.
B. Imwe neimwe yezvirevo zve "kuvimbisana" yaunonyora inogona kuverengerwa uye ini, zvakare, ndinoitsanangura sekuvimbisana. Kwandinogovera kunyunyuta kwako ndipo apo imwe neimwe yezvirevo izvi inoverengerwa nekuda kwavo. Nekuda kwekuti mumwe munhu anosiya chirevo hazvireve kuti vari padyo nekutora bhizinesi-rinotsanangurwa chiito sekutenga. Kuita zvekubatana kunofanirwa kuvaka kune imwe mhedzisiro inodiwa nebhizinesi. Kushambadzira kunofanirwa kupedzisa iyi (kazhinji isiri-mutsara) nzira. Semuyenzaniso, uko Travelocity yakakundikana kwaive kungogadzira imwe inotonhorera yekuzivisa mushandirapamwe pasina kufunga kuti kubatanidzwa kwega kwega kwevatengi kwaizoita sei kuti munhu apedze chinangwa chekupedzisira.
C. Kana tichida kushanda nekuenzanisa kwako…Handifunge kuti makambani ega ega anowana mhete kubva kumakasitoma awo. Makambani anofanirwa kugara achikwezva mutengi, kuvabata, kuvaka hukama hutsva navo. Kana kambani ichifunga kuti yakazofamba nevatengi vayo pasi munzira mukuroora, vanozoshamisika chaizvo kukurumidza kurambana kuri mumufananidzo wavo.
Ndine urombo nekutaura kwakareba-mhepo, asi ini ndinotenda kuti kubatanidzwa ndiyo yakakosha metric yekushambadzira uye kuti inogona kuvakwa zvakanyanya. Ingori maonero akasiyana.
Apr 25, 2009 pa 12: 37 PM
Mhinduro yakanaka uye kutaurirana kwakanaka. Mukati memhinduro dzenyu, ndinopokana nepfungwa yekuti chero chezviitiko izvi 'zvinotungamira' kuhukama hwemari. Ndiratidze faniro yekutengesa yekambani imwe inopa humbowo hwekuti nzira dzekutanga dzekuti vanhu vatenge kubva kubhizinesi rako dzinotanga ivo vachipa mhinduro pablog rako…
Ini ndinofungidzira kushushikana kwangu kuri muchokwadi chekuti vanhu vanotenda kuti iyi yave kuita imwe mhando yekunyepedzera kuita chiratidzo kumabhizinesi. Semutengesi, ndinofanira kupa EVIDENCE uye data yekuongorora inoratidza chikonzero uye hukama hwehukama pakati pezvinhu izvi nekutenga chaiko. Kusvika iye zvino, ndinofunga kuti bs
Apr 25, 2009 pa 7: 45 PM
Doug, uyu mufananidzo mukuru, uye ndinobvuma 'kuvimbisana' kunoshandiswa zvakanyanya uye kupera simba. Pakupedzisira vatengesi vanofanirwa kutarisa pane izvo zvinotyaira bhizinesi uye zvinounza vanhu zvakakomba nezvekupa mari yavo kune zvigadzirwa nemasevhisi ako. -Michael